Onye isi FTX na-ahụ ohere na ahịa nsogbu - CoinWorldMap
Mee 14, 2022 Mbido
Onye isi nke FTX crypto mgbanwe zụtara 7,6% na ikpo okwu itinye ego nke Robinhood. Oke ahịa ndị a zụrụ ruru ihe ruru nde $605 n'ehihie Fraịde.
Ntinye ego nkeonwe na Robinhood bụ n'ihi na mgbanwe cryptocurrency ya nwere ike nweta ndị asọmpi asọmpi. Onye isi FTX na-enweta oke 7,6% site na Emergent Fidelity Technologies, nke ọ bụ naanị onye isi na onye nwe ya.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ Sam Bankman-Fried adịghị etinye aka na nkwekọrịta ahụ, o kwuru na FTX nwere ike ịbụ akụkụ nke ọzọ na-esote M & A na-abịa ọ na-ebu amụma ga-eme.
Bankman-Fried, onye nchoputa na onye isi oche nke FTX, zụtara ihe dịka nde 56 nke Robinhood, nke ruru ihe dịka nde $ 648, dịka ntinye akwụkwọ nhazi na nso nso a. Emere ịzụrụ ihe site na Emergent Fidelity Technologies, ụlọ ọrụ edebanyere aha na Antigua na Barbuda. Bankman-Fried bụ onye nwe Emergent.
Bankman-Fried jụrụ ikwu okwu banyere nkwekọrịta Robinhood, nke na-etinyeghị FTX, maka ugbu a, ma o kwuru na N'ajụjụ ọnụ na nso nso a na Blockworks na ọnọdụ ahịa siri ike na oghere dijitalụ nwere ike ịkpalite mmụba nke mergers na nnweta.
"E nwere ọtụtụ azụmahịa M & A na-abịa," ka o kwuru, na-agbakwụnye na "ọ gaghị abụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ FTX" iji nweta ụfọdụ azụmahịa nke mgbanwe na-ebelata.
Alaka America FTX zụtara ọdịnihu ego dijitalụ na mgbanwe nhọrọ LedgerX n'afọ gara aga iji dọta ihe ndị sitere na crypto na ntọala onye ọrụ US. Na nso nso a, na February, FTX kpughere na ọ na-ezube inweta fintech firm Liquid Group na mgbalị ịnyagharịa Japanese cryptocurrency iwu.
Onye na-ekwuchitere Robinhood jụrụ ịza ajụjụ, kama na-atụ aka na post Twitter nke ụlọ ọrụ wepụtara na Tọzdee.
tweet na-agụ, "Anyị na-agbadata okpukpu abụọ n'iwulite ụlọ ọrụ dị iche iche ebe ndị ahịa nwere ike ịmepụta akụ na ụba maka ọgbọ ha." — N’ezie, anyị na-ewerekwa ya dị ka itinye ego na-adọrọ adọrọ. Anyị nwere ndị ahịa kacha mma, anyị na-ewebata nnukwu ngwaahịa ọhụrụ, anyị nwekwara otu iji mejuputa ha. "
Mbido kọrọ mfu ego ruru nde $392 na nkeji mbụ. Ego netwọsị ụlọ ọrụ ahụ maka ọnwa atọ mbụ nke 2022 bụ $299 nde, sitere na $522 nde na nkeji mbụ nke 2021. Ego e nwetara n'ịzụ ahịa bụ nde $218, ihe dị ka ọkara n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. Azụmahịa Crypto nwetara $54 nde n'ime ego ndị a, site na $88 nde na nkeji mbụ nke 2021.
stETH na ETH na-egosi ihe ịrịba ama nke iche